Ny fahotana vokatry ny asan'ny maizina dia misalasala amin'ny fisiana ara-panahy. Ny sazy dia fahajambana ara-panahy.
Vol. 7 JULY, 1908. Tsia
Copyright, 1908, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Ny teny hoe DOUBT dia teny ampiasain'ny olona tsy dia nahita fianarana firy, ary koa ireo nianatra. Kanefa vitsy amin'ireo izay mitazona azy io dia tsy hijanona hijery sy hijery ny fitsipika izay ambaran'ny teny.
Ny fisalasalana dia avy amin'ny duo, roa, izay misy ny hevitra momba ny duality momba ny zavatra, ary manitatra tsy misy hatak'andro amin'ny zava-drehetra. Raha misalasala ny hevitry ny roa, na ny duality, dia miaraka foana ny tsy fahatanterahana, satria mizara na mijoro eo anelanelan'ny roa. Ny hevitra roa dia avy amin'ny vatana, izay fototry ny natiora na zavatra. Ny votoatiny dia homogénous ao aminy, saingy miseho amin'ny alalan'ny toetra iray-ny duality. Ny duality no fiandohan'ny fisehoan'ny olona manerana izao tontolo izao. Ny duality dia mitohy amin'ny atoma tsirairay. Ny duality dia ao amin'ireo lafiny roa tsy azo sarahina sy mifanohitra amin'ny vondrona.
Ny tsirairay amin'ireo mpanohitra dia manapaka ny iray hafa ary ny ankilany kosa dia ny an'ny hafa. Indray mandeha dia misy iray eo amin'ny ascendency ary avy eo ny iray hafa. Ny fisalasalana dia miaraka amin'ny roa, mitarika ny tsirairay hanongilan-tsofina amin'ny andaniny ary hiverina amin'ny toeran'ny iray hafa. Ny ahiahy dia mahafantatra antsika raha toa ka fomba fiasa ara-tsaina izany, saingy ny fisian'ny fisalasalana dia manatrika ny fepetra rehetra mifandraika amin'izany, hatrany am-piandohan'ny fisehoana mankany amin'ny fahombiazan'ny fahalalàna. Ny fisalasalana dia miasa amin'ny alàlan'ny tontolo miseho rehetra; mitovy amin'ny fitsipika, ary miova arakaraky ny fiaramanidina ataony.
Ny fisalasalana dia avy amin'ny tsy fahalalana. Miova arakaraka ny fampandrosoana ny maha izy azy izany. Ao amin'ny olombelona, ​​ny fisalasalana dia ny toe-tsain'ny saina, izay tsy hanapa-kevitra ny saina iray ho an'ny iray amin'ireo lohahevitra roa na zavatra ireo ny saina, na tsy matoky ny iray hafa.
Ny fisalasalana dia tsy fanadihadiana mikasika ny foto-kevitra rehetra, na ny fikarohana sy ny fanadihadiana, na ny dingam-pahaizana; na dia matetika aza ny eritreritra, ary avy amin'ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana amin'ny lohahevitra iray.
Ny fisalasalana dia tahaka ny rahona izay mangalatra ny saina ary manakana azy tsy hahita tsara mazava, ary mamaha olana amin'ny zavatra hita maso. Toy ny rahona, ny fisalasalan'ny fitomboan'ny fisalasalany sy ny hamafiny dia tsy mahavita manao zavatra araka ny fahazoany azy, na mizaka tena ary manao zavatra amim-pahatokiana. Kanefa ny fisalasalana dia ny toe-tsaina ao an-tsaina izay ilaina mba hahitana traikefa sy fandresena mialoha ny hamoahana ny fahitana ara-tsaina.
Mifamatotra sy mifandray amin'ny fisalasalana, amin'ny maha-razambe, mpampianatra, mpiara-mitory, zanaka sy mpanompon'ny fisalasalana, dia fahadisoam-panantenana, fisalasalana, tsy manam-paharetana, tsy fahafaham-po, fahononam-po, fikorontanana, fikorontanan-tsaina, fikorontanan-tsaina, tsy firaharahiana, tsy finoana, fahamendrehana, tsy firaharahiana, tsy fanekena, tsy fahazoana antoka, fanandevozana, maloto, tsy fahalalana, tahotra, fisavorovoroana, ary fahafatesana. Ireo no sasantsasany amin'ireo fepetra ahafantarana ny ahiahy.
Ny fisalasalana dia miorim-paka ao an-tsaina, raha ny tena marina dia ny dikany amin'ny iray amin'ireo asan'ny saina: izay miasa na ny toetoetran'ny saina izay antsoina hoe maizina, matory. Ny fisalasalana dia iray amin'ireo antony izay nanapa-kevitra ny fomba fisainan'ny saina avy amin'ny laharana voalohany amin'ny fisian'ny fahatsiarovana lalandava. Ny fisalasalana dia singa manan-danja amin'ny fihetsiky ny olombelona, ​​dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fijaliana izay maha-olombelona ny mpandova ary ny toe-javatra iainan'ny olombelona amin'izao fotoana izao. Ny fisalasalana dia iray amin'ireo sakana amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny olombelona.
Ny fisalasalana izay miatrika ny olona amin'ny andavanandrom-piainany isan'andro sy amin'ireo zava-manahirana lehibe eo amin'ny fiainany dia niseho teo aloha, teo amin'ny fiainany talohan'ny toe-javatra samihafa. Miseho ankehitriny ny fisalasalana satria tsy naharesy azy omaly. Mitsangana anio izy ireo ankehitriny mba hanakanana ny fivoaran'ny lehilahy iray na mba ho resin'ny fahalalana amin'ny alalan'ny asa. Ny vanim-potoana na vanim-potoanan'ireo fisalasalana izay miseho dia miankina amin'ny fandrosoana sy ny vanim-potoana izay nahatonga ny fisian'ny fisalasalana toy izany ho an'ny olona niaina izany.
Misy karazany efatra na karazana fisalasalana. Mifandray amin'ny tontolo ara-batana sy ireo tontolo telo ao anatiny sy manodidina azy: ny fisalasalana ara-batana, ny fisalasalana ara-tsaina, ny fisalasalàna ara-tsaina ary ny fisalasalana ara-panahy. Ireo toetra ireo dia karazan'olona samihafa izay hitantsika, ary koa amin'ireo lehilahy efatra ao amin'ny zodiakazia izay miforona ary ahitana ny olona tsirairay. Ireo lehilahy efatra ireo dia notononina sy notohanana tao amin'ny Editorial "The Zodiac." Jereo "Ny Teny," Martsa, 1907 (Figure 30).
Ny fisalasalana ara-batana dia mifandraika amin'ny tontolo hita maso sy amin'ny vatana, ny solontenany (libra, ♎︎). Rehefa miasa amin'ny alalan'ny vatan'ny vatana ny saina, dia ampitovian'ny zava-misy rehetra eo amin'ny tontolon'ny zavaboary momba ny asan'ny vatan'ny nofo ao amin'ny tontolon'ny zavaboary. Noho izany dia manomboka misalasala ny saina amin'ny fotoana voalohany ahatsapan'izy ireo fa miasa ao amin'ny vatana izy, ary mahatsapa ny tontolo hita maso amin'ny alalan'ny vatany. Ny biby dia tsy misalasala toy ny maha-olombelona. Manomboka mandeha ny zaza raha vantany vao teraka, fa ny olombelona kosa tsy afaka mitsangana na mikaroka ary mitaky volana maro na taona maro alohan'ny hatokafany ny tongony ary mitazona ny fahasamihafan'ny vatana rehefa mandeha. Ny zanak'olombelona dia mitondra azy ireo toy izany koa ny fanahiny amin'ny ray aman-dreniny toy ny alika na zanak'omby avy amin'ny ray aman-dreniny. Raha toa ka noho ny fitiavan-tena fotsiny dia tokony hanosika handeha sy hanao fanatanjahantena toy ny zanak'omby na puppy iray ny zazakely. Saingy tsy afaka. Izany dia noho ny maha-olombelona ny biby dia tsy miankina amin'ny biby sy ny fironana amin'ny razany ihany, fa eo ambany fahefan'ny tsirairay, ny saina; ary ny saina vaovao vao tonga, tsy manana ny fahatokisana ny traikefa ankehitriny, dia tsy afaka mandeha; Misalasala ary matahotra izy fa hianjera ny vatany. Raha vao natsipy tao anaty rano voalohany, ny soavaly iray, na saka, na biby hafa, dia hipoitra tampoka ho eny amoron-dranomasina, na dia tsy mandeha ho azy aza ny rano. Afaka milomano amin'ny fiezahana voalohany izy io. Saingy misy lehilahy iray izay mipetraka voalohany ao afovoan-tany, dia handrantsana, na dia mety ho nianatra ny teom-pitetezana aza izy talohan'ny nanaovany izany. Ny singa misy ny fisalasalana dia manelingelina ny biby voajanahary amin'ny vatan'olombelona ary manakana azy tsy hampiasa ny herin'ny natiora, ary ny fampiharana ny teoria momba ny fifidianana izay nianarany. Ny fihetsika voajanaharin'ny vatana dia matetika voamarin'ny fisalasalana izay mitranga ao an-tsaina. Izany fisalasalana izany dia mitarika ao an-tsaina avy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa, amin'ity tontolo ity, mandra-paharesy ny ahiahy. Ny vatan'ny vatana dia ampifanarahana amin'ny tontolo hita maso, fa ny saina dia tsy teratany eto amin'ity izao tontolo izao ity; Vahiny ho an'ity tontolo ity sy ny vatany izany. Ny tsy fahafantarana ny saina amin'ny vatany dia mamela ny singa ao anatin'ny fisalasalana ao an-tsainy mba handresy lahatra ny fihetsika sy hanelingelina ny fanaraha-maso ny vatana. Izany dia mihatra amin'ny toe-javatra iainana rehetra sy amin'ny toe-javatra sy ny toerana misy ny olona amin'ny alalan'ny lova.
Mihamitombo tsikelikely ny saina ny saina ary afaka mifehy ny fihetsik'izy ireo amim-pahalemem-panahy sy amim-pahasoavana. Raha ao anatin'ny fampivoarana tsy tapaka ny lehilahy, rehefa avy nianatra ireo zavatry ny tontolo ara-batana ilaina aminy mba hahafantarana azy-ohatra, toy ny fampiharana sy fananarana ny vatana, ny fikojakojana sy ny fivelomana amin'ny alalan'ny orinasa na ny matihanina toerana, ny fomba amam-panao eo amin'ny sehatra iainany ary ny literatiora amin'ny vanim-potoana-ary fantany tsara amin'ny fampiasana ordinatera fa efa resiny ny fisalasalany teo aloha, ary raha nianatra nanam-pahatokiana sy hatoky ny toerana misy azy izy, dia lasa ny dingana voalohan'ny ahiahy ny saina ary miatrika ny fisalasalana izay mitranga amin'ny tontolo tsy fantatra.
Raha misy zavatra avy amin'ny fanjakan'ny tontolo misaina manjary na misaina amin'ny fisainana ara-batana, dia misalasala ao an-tsaina ny fisalasalana fa misy tontolo tsy hita maso sy ao anatiny ary manodidina ny ara-batana, satria lasa saina sy mahazatra ny saina ny vatana ara-batana, ary ampianarina sy mifototra amin'ny vatana sy ny zavatry ny tontolo hita maso. Mampisalasala fa ny hetsika ara-batana dia mety ho avy amin'ny loharano tsy hita maso. Ny fisalasalana toy izany dia mifandraika amin'ny tontolo tsy hita maso na manahirana amin'ny faniriana sy ny endriny. Ny solontenany ao amin'ny olombelona no linga-sharira, na vatana (virgo-scorpio, ♍︎-♏︎), ary ny biby sy ny fironana azy.
Ireo no fisalasalana izay ananan'ity lehilahy ity mba hiatrehana sy hiady amin'ny fiainana isan'andro sy ny fihetseham-pony. Ireto ny loharano avy amin'ny hetsika ara-batana. Ireto ny hery sy ny sampana mifanaraka amin'ny, ny antony mahatonga ny fihetsiketsehana sy ny fihetseham-po tahaka ny hatezerana, ny tahotra, ny fitsiriritana, ny fankahalana, ary ny fahatsapana hafa tahaka ny fahafinaretana sy ny fahatsapana fahasambarana adala. Ireto ny hery sy ny sampana izay miasa amin'ny vatan'ny olona marefo. Ireo fihetseham-po sy fihetseham-po ireo dia mahatsapa amin'ny alalan'ny vatana ara-batana miaraka amin'ny saina amin'ny alalan'ny saina. Ireo hery ireo dia tsy hita maso amin'ny olombelona ara-batana, saingy hita amin'ny maha-psychika azy, rehefa amin'ny fanao sasany, na amin'ny alalan'ny "medium", na amin'ny aretina, ny olona psychic dia hafahana na misaraka amin'ny kofehin'ny vatana. Ny fahatsapany dia alaina amin'ny octave etsy ambony ary ao anatin'ny tontolo hita maso.
Ny fisalasalana rehetra izay nanafoana ny lehilahy ara-batana dia efa nihaona sy nandresy, na dia resy aza izy ireo tao amin'ny vatana. Voafandrizay ao amin'ny tontolo psychic sy ny vatana astral izy ireo raha oharina amin'ny dingana izay nifanena tamin'izy ireo sy naharesy azy ireo.
Ao anaty sy ambonin 'ny tontolo ara-batana sy ara-tsaina ary ny lehilahy dia ny tontolo ara-tsaina sy ny sainy misaina (fisainan' ny fiainana, ♌︎-♐︎).
Izao no tontolo iainan'ny olona indrindra, ary, noho ny antony ilàna ny saina hiasa amin'ny vatany, dia izao tontolo izao no misalasala ny ankamaroany. Avy amin'ny fampiasana ara-batana na fanararaotana ny vatana nofoanan'ny vatana, ny saina dia mampifandray ny fiainany amin'ny fiainana ara-batana ka hadinony ny tena maha izy azy ary ny tenany dia miavaka amin'ny vatany. Ny fisainana dia mamaritra ny eritreritra amin'ny vatany sy ny fiainany ara-batana, ary rehefa aseho ny hevitra fa ny saina sy ny hevitra dia miavaka amin'ny vatana, na dia mifandray aminy aza, ny fisalasalan'ny saina ary maniry ny mandà izany fanambarana izany.
Izany fisalasalana izany dia hita matetika kokoa amin'ireo izay efa nianatra fa tsy ny tsy nahita fianarana, satria ny olona mianatra dia mianatra amin'ny zavatra izay mihatra amin'ny saina amin'ny fifandraisany amin'ny tontolon'ny zavaboary, ary izay misafidy ny hisaina ny zavatra sy ny lohahevitra izay Ny fifandraisana amin'ny tontolo ara-batana dia tsy voafehy amin'ny fialany amin'ny sainy ary mitombo ao anaty fiaramanidina avo kokoa. Ilay lehilahy hendry dia tahaka ny voaloboka, izay mifikitra amin'ny zavatra nafatony sy niorenany. Raha tokony handà tsy hifikitra amin'ny voaloboka ny voaloboka, tokony ho afaka hamela ny fiorenany, hikapoka ary hitombo avy amin'ny tany tondraka kokoa, dia tsy hihinana voaloboka intsony. Raha afaka mivoaka amin'ny sainan'ny saina hafa ilay olona mahay, ary ny eritreritr'izy ireo dia tokony hitombo sy hivoatra avy amin'ny ray aman-dreny izay efa nampitombo ny sainy hafa, dia tsy mila mitombo amin'ny fitomboan'ny hafa izy, toy ilay zavamaniry ary voatery hanaraka ny tanjany ho azy manokana, fa izy kosa dia fitomboan'ny tsirairay ary manana ny zo hanolo-tena amin'ny rivotra malalaka ary handray ny hazavana avy amin'ny lafiny rehetra.
Ny voaloboka dia mifikitra amin'ny zavatra; Tsy afaka manao izany izy satria zavamaniry iray ihany, zavamaniry iray. Saingy ny olona dia afaka manaisotra ny eritreriny ary manalavitra ny fitomboan'ny fianarana satria maha-zavamaniry ara-panahy izay manana andraikitra sy anjarony amin'ny fampiroboroboana ny fanjakana mahagaga amin'ny natiora ary ao anatin'ny faritra marevaka ara-panahy . Ny lehilahy amin'ny fianarana sy ny fanabeazana fotsiny dia tsy mitombo mihoatra ny fianarany noho ny ahiahy. Ny fisalasalana, ary ny tahotra izay mampiato ny fisalasalana, dia manjary izy kokoa ny miankina amin'ny fianarana. Ny fisalasalana dia mahatonga azy hisalasala. Izy no misalasala loatra; ny tahotra dia manosika azy ary manosika azy hiverina any anaty ala hianatra izay tiany ho fiafaran'ny ezaka rehetra, na koa manohy misalasala izy mandra-pahatonga azy hisalasala ny zava-drehetra, anisan'izany ny fianarany sy ny fisalasalany.
Ny fisainana izay mihevitra ny tenany ho toy ny eritreritra izay miasa ao amin'ny tontolon'ny saina, izay tsy mitovy amin'ny tontolon'ny zavaboahary dia voatery foana amin'ny fisalasalana. Ny olana atrehin'ny saina: toy ny: ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny natiora, ny fiavian'ny olombelona, ​​ny adidy eo amin'ny fiainana, ny tanjona faratampony, ireo izay manohitra ny saintsika rehetra manandrana manao asa maimaimpoana ao amin'ny tontolon'ny saina.
Ny fisalasalana mikasika ny iray amin'ireto fanontaniana ireto, na ny fahalalahana malalaka ao an-tsain'ny saina dia manana fironana hanamaivana ny fahitana ara-tsaina. Raha maizina ny fahitana ara-tsaina, dia lasa matoky ny fahazavany ny saina. Raha tsy misy ny mazava dia tsy afaka mahita na mamaha ireo olana izy, na tsy mahita ny lalany, ka noho izany dia mianjera indray eo amin'ny sehatra misaina izay efa nahazatra azy.
Saingy ny saina izay mahatoky ny asa maimaim-poana dia manala ny haizina amin'ny fisalasalana. Mahita ny fihetsika ataony amin'ny alalan'ny eritreritr'izao tontolo izao izy. Ny fahazoana fahatokisana sy fisainana ara-tsaina ny eritreriny sy ny eritreritr'izao tontolo izao, dia mahita fa ny endrik'izao tontolo izao dia mamaritra ny eritreritry ny tontolon'ny saina, fa ny fifangaroan'ny faniriana sy ny korontana vokatry ny fihetseham-po dia noho ny fisavorovoroana ny eritreritra sy ny fifanoheran-kevitra mifandraika amin'ny ady, fa ny antony mahatonga ny hery sy ny maha-olona manana endrika ao anatin'ny tontolo misaina dia tapa-kevitra amin'ny eritreritry ny saina. Rehefa tanteraka izany, dia voavaha ny fisalasalana rehetra momba ny antony mahatonga ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po, ny hetsika iray dia hita mazava ary ny antony mahatonga azy ireo fantatra.
Ny fisalasalana mikasika ny tontolo ara-panahy sy ny olombelona ara-panahy dia mifandray amin'ny vatana tsy mety maty izay mifampikasika sy mifandray amin'ny olona ara-batana amin'ny alalan'ny saina voajanahary. Amin'ny maha-solontenan'ny tontolo ara-panahy an'Andriamanitra, ny saina iraisam-pirenena, ny olombelona ara-panahy dia ny saina ambony kokoa, ny maha-izy azy ao amin'ny tontolo ara-panahy (kôkô-kapikirana, ♋︎-♑︎). Ny fisalasalana toy izany dia maneso ny saina voajanahary dia: mety tsy hijanona maharitra aorian'ny fahafatesana; fa raha ny zava-drehetra dia miditra ao amin'ny tontolo ara-batana vokatry ny fahaterahana ary mandao ny tontolo hita maso amin'ny fahafatesana, dia hivoaka avy ao amin'ny tontolon'ny zavaboary koa izy ary hitsahatra tsy hisy; fa mety ho vokatra na fanehoan-kevitra avy amin'ny fiainana ara-batana ny eritreritra, fa tsy ny antony mahatonga ny fiainana ara-batana. Mbola misy fisalasalana lehibe kokoa, na dia tsy maintsy maharitra maharitra aza ny saina aorian'ny fahafatesana, dia hiditra ao amin'ny fanjakana iray mifanaraka amin'ny fiainana ety an-tany izany, fa hiaina mandrakizay ny fiainana eto an-tany amin'ny nofo ary tsy hiverina eto an-tany ny fiainana.
Ny fisalasalana dia misalasala ny fisian-javatra na ny fisian'ny fisian'ny tontolo ara-panahin'ny fahalalana izay hevitra avy amin'ireo fe-potoana rehetra misy, izay heveriny fa avy amin'ny hevitra; fa izao tontolo izao maharitra amin'ny fahalalana, amin'ny endriny tsy mety maty, dia vokatry ny faniriana saina iray fa tsy hoe ny fanambarana ny zavatra ara-panahy. Farany dia misalasala ny fisainan'ny saina iray fa mitovy amin'ny an'ny tsy fisian'ny saina sy ny saina iraisam-pirenena. Izany fisalasalana izany no fisalasalana lehibe indrindra, manimba sy manjavozavo ny rehetra, satria mikendry ny hanasaraka ny saina izay nanjavona ary izay iharan'ny herisetra amin'ny toe-pahatongavana, avy amin'ny ray aman-dreniny mandrakizay sy tsy mety maty.
Fahadisoana ny fisalasalana. Io fahotana mahatsiravina io dia ny fisalasalana amin'ny maha-ara-panahy azy. Ny sazin'ity fisalasalana ity dia ny fahajambana ara-panahy sy ny tsy fahafahana mahita fahamarinana ara-panahy amin'ny zava-drehetra na dia voamarika aza.
Ny antony mahatonga ny fisalasalan'ireo lehilahy samihafa dia ny haizim-pito tsy misy fiafarana. Mandra-pahatonga ny haizina dia nesorina na novaina tamin'ny hazavana anatiny, ny olona dia mbola hanohy hisalasala ary hijanona ao amin'ny toe-javatra izay ahitany azy eto. Ny fisalasalana momba ny tsy fahafatesan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny olombelona dia ireo izay manapaka sy mifehy ny fiainany amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny sainy. Ny tahotra dia mihazona eo anoloan'ny saina ary mahatonga ny fisalasalan'ny fisalasalana. Ny lehilahy dia mamela ny tenany ho pretra, mba hitazona ao anatin'ny haizina ara-tsaina sy hoentina ho fanekena amin'ny fisalasalan'ny fisalasalana roa sy ny tahotra. Tsy ny marenan'ny tsy mahalala ihany ihany no ampiharina fa ny olona mianatra ihany koa izay efa nomanin'ny fanatanjahan-tena tany am-piandohana ho ao anaty andrin-jiro sasany, ary tsy dia matahotra loatra ny hiankandrefana ankoatra ny paingony ary tsy isalasalany ny fahafaha-mivoatra amin'izy ireo.
Misalasala ny fisalasalana ny fisalasalana. Ny olona misalasala foana dia fahantràna ho an'ny tenany sy ho fanoherana amin'ny manodidina azy. Ny fisalasalana manosika ny olona ho mibitsibitsika, manozongozona fahalemena izay tsy sahy mihetsika, manahy ny vokatry ny asany. Ny fisalasalana dia mety hitodika any am-pihetseham-po ny fisainana sy ny fanontanina, izay mahafaly azy ireo ny mifamaly sy mibaribary, manipy haizim-pito na mampihetsi-po ny zavatra inoan'ny olona mifandray aminy, momba ny fanantenana na fahatokiana amin'ny fiainana ho avy, amin'ny toeran'ny finoana sy ny fanantenana, hamela tsy fahafaliana, tsy fahafaham-po ary fahadisoam-panantenana. Ny fisalasalana dia mitaky fisalasalana ao an-tsain'ny olona iray tsy manantsiny sy tsy mitongilana ary miahiahy ny antony manosika ny hafa, izay mahita ny fahadisoana amin'ny zava-drehetra, izay manendrikendrika sy manala baraka ary manandrana manindry ny rehetra amin'ny fisalasalana ao an-tsainy.
Ny fisalasalana dia ny tsy fahatanterahana izay mahatonga ny saina hiatrehana eo, ary tsy hanapa-kevitra mihitsy, zavatra iray na iray hafa. Ny haizim-pito dia natsipy tao an-tsaina noho ny fihodinana teo anelanelan'ny fanjakana roa na maromaro ary tsy nanapa-kevitra na hanapa-kevitra. Noho izany dia mahita lehilahy mahatsiravina isika, izay tsy manapa-kevitra na inona na inona, na ny fahaiza-manaony, raha manapa-kevitra izy ireo, dia tsy mahavita manao zavatra noho ny fisalasalana na tahotra izay mitranga amin'ny fanapahan-kevitra. Ny fisalasalan'ny fisainana sy ny fandavan-tena amin'ny asa dia mahatonga ny saina tsy ho afaka hanapa-kevitra sy hanao zavatra, fa hampirisika ny kamboty sy ny tsy fahalalana ary ny fisafotofotoana.
Na dia izany aza dia misy antony iray hisalasalana, ny ampahany tsy maintsy amaritana ny fampandrosoana ny olombelona. Ny fisalasalana dia iray amin'ireo mpandray anjara ao an-tsaina ao anatin'ny sehatry ny hazavana. Ny fiahiahiana ny lalana rehetra mankany amin'ny fahalalana. Saingy ny fisalasalana dia tsy maintsy mandresy amin'ny saina raha toa ka maniry ny hametraka am-pahibemaso any amin'ny tontolo anaty izy. Ny fisalasalana no miambina ny fahalalana izay manakana ny tahotra sy ny fahalemena tsy hivoaka ny toerany. Ny fanahiana dia mamerina ireo zaza sembana izay te-hitombo tsy misy ezaka, ary lasa hendry tsy misy fahalalana. Satria ny haizina dia ilaina amin'ny fitomboan'ny biby sy ny zavamaniry, toy izany ihany koa ny haizina amin'ny fisalasalana ilaina amin'ny fitomboana.
Ny fisalasalana tsy misaina izay tsy nahalala ny fitsarana marina na ny hetsika tokony hatao dia aseho amin'ny fotoan-tsarotra amin'ny fiainana. Ohatra, ohatra, toy ny hoe rehefa misakafo ny fiara roa rehefa manakaiky ny lalana mifanohitra. Mijery ny làlana voalohany izy, avy eo ny iray hafa, tsy mieritreritra ny fomba handosirana ny loza. Io faniratsirana izay atrehan'ny fisalasalana io, dia toa miteraka fatiantoka hafahafa ho an'ny fihetsika diso, raha toa ka tsy mihazakazaka manoloana ny tongotry ny soavaly izany.
Ilay nanapa-kevitra ny hanapa-kevitra eo anelanelan'ny toerana roa dia nanome azy, noho ny fisalasalany momba ny safidy mety, dia matetika hita fa mamela ny fotoana tsara indrindra. Ny fahafahana tsy miandry mihitsy. Ny fahafaha-manao dia manatrika foana na dia mandalo foana aza. Ny fahafahana manao dia fitetezana fahafahana. Ny lehilahy fisalasalana dia nanararaotra ny fahafaha-lasa ary very, fa ny fotoana laniny amin'ny fitarainana ny fatiany ary manambany olon-kafa, manakana azy tsy hahita ny fahafahana amin'izay fotoana izay, saingy tsy hita raha tsy efa lasa ihany koa. Ny fanalefahana tsy an-kijanona sy ny tsy fahafahana mahita ireo fahafaha-manao dia mahatonga ny olona iray hisalasala ny fahaizany mifidy na hanao zavatra. Ny olona izay misalasala foana ny eritreriny sy ny zavatra ataony dia miteraka fahantrana, tsy fahamendrehana, ary fahavetavetana, izay manohitra ny fahatokisana amin'ny asa. Ny hetsika azo antoka dia mitarika ny tanana izay mamoaka baolina iray mankany amin'ny marika. Amin'ny tanana amin'ny asany, amin'ny làlana, amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, amin'ny lamosin'ny loha, amin'ny fijerin'ny maso, amin'ny feon'ny feo, ny toe-tsain'ny mpihaza na ny mpihetsika Azo itokisana amin'ny fahatokiana.
Ny fisalasalana dia ny zavatra maizina sy tsy misy fiafarana izay mahatonga ny saina hikorontana sy ho lasa matanjaka rehefa mandresy izany. Ny fahalalana dia tonga na mihamitombo ny fisalasalan'ny resy, saingy ny fahalalana irery ihany no ahazoana ny fisalasalana. Ahoana àry no handresentsika ny ahiahy?
Ny ahiahy dia resy amin'ny fanapahan-kevitra azo antoka arahin'ny hetsika izay asehon'ny fanapahan-kevitra. Ny fanadihadiana izay ny ankabeazan'ny lohahevitra roa na zavatra hafa dia tsy ny fahatokisana ny jadona amin'ny hetsi-panoherana tsy misy dikany, ary tsy misalasala izany, na dia misalasala aza ny fisalasalana ary hanjaka rehefa tsy mandà ny fanapahan-kevitra na tsia. Ny fisalasalana dia tsy manapa-kevitra mihitsy; Manelingelina hatrany izany ary manakana ny fanapahan-kevitra. Raha misy mandresy ny fisalasalana, ny fisafidianana ny zavatra roa, na ny fanapahan-kevitra, dia tokony handinika sy hanao asa mifanaraka amin'izany izy, aorian'ny fisaintsainana ny fanontaniana, tsy misy fisalasalana na tahotra ny vokatr'izany. Raha toa ka tsy nahatsapa ny fanapahan-keviny sy ny fihetsika toy izany dia mety ho diso ary raha ny marina, amin'ny tranga toy izany dia diso izany matetika. Na izany aza, tokony hanohy handinika ny foto-kevitra manaraka na fanontaniana izy ary hanapa-kevitra sy hanao asa mifanaraka amin'ny fanapahan-keviny, tsy misy tahotra. Ity fanapahan-kevitra sy fihetsika ity dia tokony horaisina rehefa nodinihina tsara ny fahadisoana nataon'ilay fanapahan-kevitra sy fihetsika teo aloha. Mba hampidirana ny fisalasalany tsy hay hadinoana raha toa ka voaporofo fa diso ny fihetsiketsehana iray, na dia heverina ho marina aza izany amin'izao fotoana izao, dia manjavona ny saina ary manakana ny fandrosoana. Tokony hiaiky ny fahadisoany ny olona, ​​manaiky izany ary manitsy azy amin'ny fanatanterahana azy. Ny fahadisoany dia tokony handray soa amin'ny alàlan'ny famelana azy hahita azy.
Amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy fihetsika mitohy, ny fanekena ny fahadisoan'ny olona iray ary ny ezaka mafy hanaiky sy hanitsy azy ireo, dia hamaha ny misterin'ny hetsika tsara. Ny olona iray dia hianatra hanapa-kevitra sy hanao zavatra ary hamaha ny misterin'ny hetsika marina amin'ny finoana mafy orina sy finoana fa izy dia iray amin'ny an'ny saina iraisam-pirenena na Andriamanitra, amin'ny alalan'ny maha-izy azy manokana, ny sain'ny olombelona ambony na ny saina, ary ny tena mahatsiaro azy Avy amin 'io loharano io ary avy eo dia hanazava ny eritreriny. Raha misaintsaina an'io hevitra io ny olona iray, dia mitazona azy ao an-tsainy, manapa-kevitra ao an-tsaina sy manao asa mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra, dia tsy hianatra ela be izy dia manapa-kevitra ny hanapa-kevitra amim-pahendrena ary hanao ny marina, ary amin'ny alalan'ny fitsarana marina sy ny hetsika marina dia ho avy izy ho lovam-pahalalana izay omen'ny andriamaniny ray aman-dreny, raha vantany vao nahazo izany izy.